Izinsiza Zokuhlola - Shandong QILU Industrial & Trading Co., Ltd.
Sinezinto ezithuthukisiwe futhi ukuhlolwa okuphelele kusho ukwenza ukuhlolwa nokuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yemikhiqizo yethu, njenge-spectrometer enkulu yokufunda ngqo yedijithali, umtshina ongenaphutha, i-nitrogen ne-hydroxide analyzer, umshini wokuhlola wendawo yonke, umshini wokuhlola umthelela wokushisa ongaphansi kuka -60, uZeiss imicroscope nezinye izinto ezingaphezulu kwekhulu amasethi. Eminye imishini ingokulandelayo:
* Isihloli seCarbon / Sulphur
I-CS-2000 ye-ELTRA iyona kuphela i-analyzer emakethe yokunqunywa kwekhabhoni nesibabule kumasampula we-organic kanye nezinto ezingaphili. Ngale njongo, i-CS-2000 ifakwe kokubili ukufakwa kanye nesithando somlilo esimboza uhla oluphelele lokuhlaziywa kwekhabhoni nesibabule. I-CS-2000 itholakala ngamaseli afinyelela ku-4 azimele e-infrared, avumela ukuhlaziywa okuqondile nokwenziwa ngasikhathi sinye kokugxila okuphezulu naphansi kwe-carbon kanye / noma isulfure. Ukuzwela kwamaseli kungenziwa ngokwezifiso ngakunye ngokukhetha ubude bezindlela ze-IR ukuqinisekisa ububanzi bokulinganisa obukhulu bohlelo lokusebenza ngalunye.
* Ukuqina Test
Ubulukhuni bukala ukumelana kwesampula ekuguqulweni kwezinto ezibonakalayo ngenxa yokuxinana okuqhubekayo okuvela entweni ebukhali. Ukuhlolwa kusebenza kusisekelo esiyisisekelo sokulinganisa ubukhulu obubucayi be-indenti eshiywe yi-indenter enesilinganiso esithile futhi elayishiwe. Sikala ubulukhuni ku-Rockwell, Vickers & Brinell esikalini.
* Uqine Test
Isivivinyo sokuqina lapho isampula lifakwa khona ukungezwani okulawulwayo kuze kwehluleke. Imiphumela evela esivivinyweni ijwayele ukusetshenziselwa ukukhetha okokusebenza kohlelo, ukulawulwa kwekhwalithi, nokubikezela ukuthi impahla izosabela kanjani ngaphansi kwezinye izinhlobo zamandla. Izakhiwo ezilinganiswa ngqo ngokuhlolwa kokuqina ngamandla amakhulu wokuqina, ukunwebeka okuphezulu nokuncipha kwendawo.
Inhloso yokuhlolwa komthelela ukukala amandla ento ukumelana nokulayisha okuphezulu. Imvamisa kucatshangwa ngezinto ezimbili ezishayisana ngejubane eliphakeme lesihlobo. Ingxenye noma amandla ekhono wokumelana nomthelela kaningi ngesinye sezici zokunquma empilweni yesevisi yengxenye ethile, noma ekufanelekeni kwento ekhethiwe yohlelo lokusebenza oluthile. Ukuhlolwa komthelela kuvame ukuqukethe ukucushwa kweCharpy ne-IZOD Specimen.
* Ukuhlolwa kwe-Spectro
Senza ukuhlolwa kwe-spectro ekushiseni kwempahla eluhlaza, okwenziwe okuningi nokushisa okuphathwa ngeqoqo elilodwa ukuthola ukuthi umkhiqizo owenziwe uhambisana nokwakheka kwamakhemikhali okucacisiwe.
* Ukuhlolwa kwe-UT
Ukuhlolwa kwe-Ultrasonic (UT) kungumndeni wamasu wokuhlola angonakalisi ngokususelwa ekusakazweni kwamagagasi e-ultrasonic entweni noma ezintweni ezihloliwe. Kuzinhlelo ezivame kakhulu ze-UT, amagagasi amafushane kakhulu e-ultrasonic pulse anezikhutha zesikhungo ezisukela ku-0.1-15 MHz, futhi ngezikhathi ezithile kuze kufike ku-50 MHz, adluliselwa ezintweni zokwakha ukuthola amaphutha angaphakathi noma ukwenza izinto ezibonakalayo. Isibonelo esivamile isilinganiso sokujiya kwe-ultrasonic, esivivinya ubukhulu bento yokuhlola, ngokwesibonelo, ukuqapha ukugqwala komsebenzi wepayipi.
Ungakuhlanza Kanjani Ukugqwala KweCarbon Steel
Carbon steel has izicelo eziningi. Njengempahla eqinile isetshenziswa ekwakheni izakhiwo, amathuluzi, izimoto nezinto ezisetshenziswayo. Insimbi yeCarbon ithanda kakhulu ukugqwala, ngakho-ke ezimweni eziningi insimbi ine-laye-proof laye ...